Salaadda Santa Muerte si ay aniga iiga fikirto. ? 24 saacadood
Ducada dhimashada barakeysan si aan uga fikiro waa in la siiyo xuquuqda ay ku leedahay Saintan inay gasho xiriirkeena si ay noo siiso caawimaadda aan u baahan nahay.
Waa in la ogaadaa in tani ay tahay duco aan lagu sameyn oo keliya kiiskii lammaanayaashii hore laakiin marwalba la sameyn karo si loo helo qofkani inuu nagu sii hayo fikirradooda marwalba.
Waa salaad awood leh oo ay tahay inaan si taxaddar leh u sameyno maxaa yeelay natiijooyinka waa la yaab waana la ogaan karaa laga bilaabo markii aan joojineynay salaadda.
1 Ducada dhimashada barakeysan si aan uga fikiro
1.1 Goormaan u tukan karaa ducada ilaa dhimashada quduuska ah inaan ka fikiro aniga?
1.2 Tukashadu miyuu shaqeeyaa soon?
1.3 Waa maxay ducadan?
Waan lumiyay, bilaa ujeed, geesinimo iyo jacayl la'aan.
Waxaan dareemayaa lumitaan, laakiin weli waxaan rajeynayaa inaan naftayda helo. Sidaan kuu qayshaday, rumaysadkaygu waa soo noolaaday.
Waxaan kuugu imid sababta oo ah waxaan doonayaa inaan soo celiyo jiritaankeygii. Waxaan ku socday waddooyin mugdi ah, waxaan helay muuqaalo muujinaya nasiibkayga.
Waqtiyo aniga igu kalifay inaan dhaco iyo in kastoo aan kacay, maanta dhulka ayaan joogaa anigoo aan awoodin inaan joojiyo.
Geerida barakeysan, ii naxariiso oo ii toosi.
Geerida barakeysan ayaa ii soo celisa niyadda noloshayda, dhammaystirka tan oo ah kala-badh.
Waxaa mahad leh, silsiladihii xadhkaha gooyay igu soo celi oo dib nooga celi sidii baalalkii igu duushay.
Kaliya waxaan kugu kalsoonahay, adiga kaliya adiga ayaan kuu baryaa, kaliya waxaan u baahanahay inaad kasoo kabato.
Igu soo celi waddadii nolosha, Oo ay indhahaygu iftiinka ku arkaan.
Halka dhegahaygu dhegeystaan ​​muusikada iyo maqaarkaygu waxay dareemayaan taabashada dabaysha ila socota.
I soo celi, dib ii soo celi oo aanan rabin inaan fogaan. Waxaan rabaa inaan ku soo noqdo nolosha.
Waan ogahay inaad i dhageysatid, waan ku baryayaaye, noloshayda bedel, waxaan ku dhaaranayaa (balan qaado) sidaan ugu mahad naqay.
Tani waa a salaadda ka socota qalbiga Waa hagaag, marar badan mid ka mid ah dadka ku lug leh xiriirka ayaa dareemi kara inuusan ku filneyn ...
In waxyaabahaasi u socdaan sidii loogu talo galay ama shidaal dheeraad ah ayaa loo baahan yahay taasina waa meesha ay jirto duco Waxay noqotaa hubka ugu awoodda badan ee aan haysan karno.
Goormaan u tukan karaa ducada ilaa dhimashada quduuska ah inaan ka fikiro aniga?
Ma dooneysaa inaad ogaato goortaad tukan karto?
Markasta oo aan dareemeyno baahida Waxaan ku tukan karnaa ducadan kalsooni iyo kalsooni.
Meel kasta oo aan joogno, waxay qaadataa oo keliya iimaanka iyo nafta.
Dhib malahan maalinta ama waqtiga. Muhiimadu waxay tahay in la helo iimaan.
Tukashadu miyuu shaqeeyaa soon?
Salaadaha laftooda ma haystaan ​​waqti cayiman oo laga jawaabo laakiin markan waxaa jira kumanaan rumaystayaal ah oo hubiya in salaadaha kiciya dhimashada Quduuska ah laga jawaabo waqti gaaban.
Tani waxay ku xirnaan kartaa arrimo badan sida iimaanka ama darnaanta baahida loo qabo in laga gudbo, si kastaba ha ahaatee way adagtahay in la hubiyo wax sidaas oo kale ah, marka waa inaan aaminsanahay in ficillada looga jawaabayo wakhti habboon, mana aha ka hor ama ka dib.
Waa maxay ducadan?
Salaadda inaad ka fikirto ayaa ii adeegaysa ka mid noqo fikradaha qof kale.
Waxaa loo adeegsan karaa duruufaha kasta oo dhici kara iyo xitaa xiriirada aan lahayn xiriir jacayl.
Waa salaad awood leh oo ay tahay in lagu qabto masuuliyada maxaa yeelay waa inay leedahay ujeedo ama hadaf si loo gaaro maxaa yeelay waa inaanan kaliya ku mashquulin fikradaha qof kale hadaanan horey u qorsheynin waxaan sameyn doono tan xigta maadaama ay runtii waxtar tahay.
Had iyo jeer waxay ku kortaa awoodaha salaadda ilaa dhimashada Quduuska ah si aan uga fikiro.
U soo duceeya geerida barakeysan si loo celiyo kan la jecel yahay
Dhimashada Quduuska ah jacayl aan macquul aheyn